BBS Zvishandiso: gadziridza iyo GPS kubva kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
BBS Zvishandiso: gadziridza GPS kubva kuLinux
Kana iwe uchibva kuMicrosoft Windows kana uchingoda imwe nzira kune Navcore uye BBS Zvishandiso yemuno kune yako GNU / Linux distro, chokwadi ndechekuti hapana chakafanana. Asi iri harisi dambudziko hombe, nekuti mune ino dzidziso tichaenda kukudzidzisa kuti umhanye uchishandisa Waini kuti ugone kushanda nerudzi urwu rwezvishandiso zvekushandisa neGPS yako kifaa kuti irambe iri yechizvino uye isina kudiwa kwekushanyira maforamu uye akawanda masosi kwaunogona kuunganidza ruzivo nezve dambudziko iri rinotambura nevazhinji vashandisi ...
Muchidzidzo ichi tiri kufumurawo mamwe ma matambudziko aunogona kuwana uine mamwe maGPS mamodheru paunenge uchimhanya neBBS Zvishandiso pasi peWine, nekuti kunyangwe iyo waini inoenderana neyakagadziriswa ichiwedzera uye nekuwedzera, haisi yemuno Windows system iri kure nayo, uye unogona kunge uine mamwe matambudziko anowanzoitika. Mazhinji ematambudziko aya ane mhinduro uye akabatana chaizvo, nekuti mamwe mamodheru emidziyo asingaonekwe.
1 Chii chinonzi BBS Zvishandiso?
2 Nzira yekugadzira BBS Zvishandiso kushanda pasi peLinux?
3 Zvinogona kuitika matambudziko iwe aunowana neBBS Zvishandiso uye mhinduro
Chii chinonzi BBS Zvishandiso?
Kana iwe usingazive BBS Zvishandiso software, kutaura kuti iri seti yezvishandiso zvakaitiswa zveMicrosoft Windows inoshanda sisitimu uye izvo zvinokutendera iwe kuti uite maitirwo akawanda naTom Tom GPS yako. Semuenzaniso, pakati pemaitiro anowanikwa iwe unozokwanisa kuita TomTom kugadzirisa, makopi ekuchengetedza, kudzoreredza uye manejimendi ePOI (Points of Interest) yawakagadzira pamamepu kukunyevera nezvechimwe chinhu, mamake mamapu, nezvimwe.
Muchidimbu, BBS Zvishandiso ndeimwe yeakanakisa zvishandiso zvekushanda nemidziyo yeGPS kubva kuTomTom, asi zvinosuwisa kuti vagadziri vechiratidzo havana kuburitsa vhezheni vhezheni yemamwe masisitimu anoshanda. Ichokwadi kuti kune pyTomTom, Anwendung yakanyorwa mune yakadzikama Python iyo inogona kutibatsira kuti tiite zvakawanda zvezvinhu zvinogona kuitwa neBBS Zvishandiso, asi kwete zvese uye apa ndipo panobva dambudziko uye kudiwa kwekumisikidza yako Linux distro.
Nzira yekugadzira BBS Zvishandiso kushanda pasi peLinux?
Sezvandambotaura, iyo nzira yekuve neBBS Zvishandiso mune yako Linux kugovera (uye zvakare mune mamwe Unix masystem) iri kuburikidza neyakaenderana dura. waini. Naizvozvo, nhanho yekutanga ndeyekuisa Waini pane yako distro. Iwe unogona kuita izvi kubva kumahofisi epamutemo e distro yako nenzira yakapusa uye uchishandisa mapakeji manejimendi ekushandisa ayo iwe aunowanzo shandisa, imwe sarudzo ndeye kurodha pasi mapakeji anowanikwa kubva iyo yepamutemo webhusaiti yeWine uye tsoka.
Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare kuisa zvimwe zvinowedzerwa zveWine zvatakataura nezvazvo mune ino blog, senge PlayOnLinux, iyo ichatipa isu kumwe kumisikidza uye optimizations ewaini marongero. Kana tangoisa waini, zvinotevera ndizvo tora iyo yekumisikidza kana .exe yeBBS Zvishandiso zveWindows. Kamwe iyo yakadzvanywa faira yadzingwa uye yakadzvanywa, unogona kushandisa PlayOnLinux neayo graphical interface kana kuzviita kubva kune iyo terminal. achimhanya kubva kudhairekitori iko iko kunogadzika.
Chero zvazvingaitika, mhedzisiro ichave nzira yekuita iyo iwe yaunofanirwa kuteedzera kuve nayo BBS Zvishandiso zvakagadzirira mune yako system. Parizvino zvese zviri nyore, kutaura zvazviri, kana zvese zvafamba nenzira kwayo unenge wagadzirira software yako kubva kwaunogona kuita mabasa ese aya nekubatanidza yako TomTom GPS kuburikidza netambo yeUSB kuPC yako kana palaptop, izvo zvinofanirwa kukonzera otomatiki kuonekwa kwechigadzirwa.chigadzirwa uye iwe unofanirwa kukwanisa kutanga basa izvozvi, asi ...
Zvinogona kuitika matambudziko iwe aunowana neBBS Zvishandiso uye mhinduro
… Kwete nguva dzose zvese zviri nyore. Ramba uchifunga kuti kunyangwe hazvo chirongwa cheWine chakatora nhanho hombe, ichiri chiyero chekuenderana uye inogona kunge isingave 100% kunge Windows natively uye huya matambudziko. Nechikonzero ichi, madhiraivha eUSB, uye iwo ayo BBS Zvishandiso anokwanisa kuona akasiyana akasiyana akatsigirwa, anogona kusashanda nemazvo kana uchifanira kubata neiyi inoenderana dura inomhanya pakati.
Ndinokurudzira izvozvo kuitira kuti zvese zvishande nemazvo:
Isa iyo yazvino vhezheni yewaini inowanikwa.
Uyezve shandisa iyo yazvino vhezheni yeBSS Zvishandiso Izvo zvaunowana.
La Zvirongwa zvewaini Inofanirwa kunge iri iyo chaiyo.Kana ukasashandisa PlayOnLinux, iyo inogadzira zvimwe zvinhu, ndinokurudzira kuti iwe upedze imwe nguva uchigadzirisa ma parameter aunogona kuwana mukumisikidzwa kwewaini. Semuenzaniso, chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza ndechekuti iwe sarudza iyo yakakodzera OS muVhezheni kutevedzera, nekuti kana ukasarudza isiriyo vhezheni yeMS Windows inogona kusashanda zvakanaka. Kana iwe uchida kuivhura, mhanyisa iwo murairo:
Kana iwe wakateedzera nhanho dzese uye ukatadza kuona mudziyo wako, edza kuubatanidza kune imwe USB chiteshi kana kutangazve yako GPS chishandiso.
Kana zvisati zvaonekwa, edza kugadzira unit kana nyowani yekuchengetera midhi muWine. Semuenzaniso, iyo E unit: kubva kuWine marongero, Units tebhu, Wedzera imwe unit. Mamwe mamodheru angangoda kuti iyi yekuwedzera nhanho kuti ionekwe.
Kana pasina chimwe chepamusoro chashanda kwauri, imwe mhinduro ndeyokuedza a muchina ine Microsoft Windows XP yakaiswa. Unogona kuzviita neVirtualBox kana neVMWare yakaiswa pane yako Linux distro. Mune iyo yakagadziriswa system iwe unogona kuisa BBS Zvishandiso uye edza kubatanidza chishandiso. Ndakaishandisa seizvi makore mashoma apfuura uye ini handina kana matambudziko ...
Usakanganwa kusiya yako inotsanangura nemazano, kusahadzika, nezvimwe. Ndinovimba iyi dzidziso yakubatsira iwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » BBS Zvishandiso: gadziridza GPS kubva kuLinux
Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish inopinda muchikamu che "Feature Freeze", iyo beta ichasvika musi waGunyana 27
WTF: Mukomana Mugomba ... RPG Kufambidzana Mutambo paKickstarter